Dayaaradaha dagaalka oo xalay duqeymo culus goobo dhawr ah ugu geystay Al-Shabaab – Hornafrik Media Network
Wararka aan saakay ka heleyno qeybo ka tirsan gobolada Jubbooyinka ayaa sheegaya in meelo dhowr ah ay xalay ka dhaceen duqeymo diyaaradeed, kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsanaa Al-shabaab, sida aan xogta ku helnay.
Duqeymahan oo ka kala dhacay deegaano kala duwan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka dhasheen khasaare kala duwan sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda Soomaaliya.
Duqeynta koowaad ayaa fiidkii hore ee xalay ka dhacday deegaanka Xaramka, halkaas oo la sheegay in lagu dilay laba sarkaal oo Al-Shabaab ah, kuwaas oo ku socdaalayey gaari, waxaana lagu kala sheegay nin magaciisa lagu soo koobay Axmed, oo Al-Shabaab u qaailsanaa gobolada dhexe iyo ninka kale oo la sheegay inuu ahaa isku xiraha amiirrada Ajaanibta ah iyo xubnaha kale Shabaab-ka ah.
Isla deegaanka Xaramka waxay diyaaraduhu ku duqeeyeen xarun
Weyn oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen, waxayna saraakiisha noo warantay sheegeen in lagu dilay dagaalamayaal badan oo uu ku jiray nin lagu magacaabo Macalin Arbow oo ahaa sarkaalkii ugu sareeyey xubnihii ku sugnaa goobta.
Sidoo kale duleedka degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa la sheegay in isla xalay duqeyn ka dhacday lala beegsaday kolonyo gaadiid ah, iyadoo lagu soo waramayo in ku dhawaad 10 gaari halkaas looga gubay Al-Shabaab dagaalamayaal kalena looga dilay, sida ay noo sheegeen saraakiisha dowladdu.
Dhinaca kale waxay diyaaraduhu xalay bartilmaameedsadeen Jilib iyo Salagle, iyadoo Jilib lagu duqeeyey xarumo lagu tuhmayey inay ahaayeen keydka qaraxyada Al-Shabaab, halka Salagle-na lagu bartilmaameedsaday xarun weyn oo la sheegay in lagu diyaarinayey dagaalamayaal loo diyaarinayey inay qaadaan weerarro toos ah.
Saraakiisha ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka Soomaaliya ee noo waramay waxay sheegeen in goobaha xalay la bartilmaameedsaday ay xogtooda iska kaa shadeen sirdoonka Soomaaliya iyo kuwo reer Galbeed ah, sidaasna ay ugu suurta gashay inay Al-Shabaab ku weeraraan goobo dhowr ah.
Waqtiga la qabanayo doorashada guddoonka Baarlamaanka Galmudug oo la shaaciyey